Global Voices teny Malagasy » Saripika: Naparitaky Ny Polisy Ao Filipina Ireo Tantsaha Manao Fihetsiketsehana Mangata-Bary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Avrily 2016 7:34 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Sakafo, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Tamin'ny herintaona, efa nampitandrina ny manampahaizana manokana fa hisedra  haintany mahery vaika ny faritra maro ao Philippines vokatry ny toe-draharaha ara-toetrandro ateraky ny El Niño. Nandrisika ny governemanta izy ireo hiomana sy hanao ezaka fanalefahana hanampy ny tantsaha sy ireo sokajin'olona hafa marefo.
Ary rehefa manomboka mihamaina ny velaran-tany midadasika noho ny El Niño, dia maro amin'ny tantsaha no mahita fa tsy afa-mamokatra voan-tsakafo ampy ry zareo hamidy. Niakatra  amin'izay ny tahan'ny hanoanana any amin'ny faritra ambanivohitra.
Roa volana taty aoriana, nitaraina ny tantsaha tao amin'ny faritany fa mbola miandry ny anjara vary sy sakafo hafa avy amin'ny governemanta ao an-toerana ry zareo. Tamin'ny 28 marsa; mihoatra ny 5000 ny tantsaha nanapa-kevitra ny hihetsika  amin'ny alalan'ny fanaovana fanoherana eny amin'ny lalan-dehibe. Nivoady izy ireo ny hijoro sy hitazona  barazy iray mandra-pamoakan'ny governemanta vary amin-gony 15000 lasaka. Nangataka ihany koa ry zareo ny hamoahana avy hatrany ny vatsy hiatrehana ny loza hanampiana azy ireo hiavo-tena sy hanalefahana ny fangirifirian'izy ireo.
Rehefa tsy nahomby taminny fandresen-dahatra ny tantsaha hampitsahatra ny fihetsiketsehany ny governemanta ao an-toerana dia nibaiko  ny polisy tamin'ny voalohany Aprily hanaisotra ny sakana, hanaparitaka ny fivoriana, ary hisambotra ireo mpitarika mpanao fihetsiketsehana. Herisetra no nanaraka izany, izay nitarika ny fahafatesan'ny tantsaha roa. Ny fanombanana  tamin'ny voalohany no nilaza faharatrana 116 raha 87 ny isan'ny nanjavona. Hita taty aoriana ny sasany tamin'ireo notaterina ho nanjavona fa nosamborin'ny polisy.
Nalaza  an-tserasera avy eo ny diezy #BigasHindiBala  (Vary fa tsy bala) rehefa navitrika tamin'ny firesahana momba ny raharaha ny mpiserasera. Voatsikera ho nampiasa basy ny polisy nandritra ny fanaparitahana ny mpanao fihetsiketsehana satria fanitsakitsahana  ny lalàna izany. Maro no nanontany hoe nahoana no tsy maintsy nanao herisetra ny governemanta raha nangata-tsakafo fotsiny ny tantsaha.
Rehefa nitsipaka ny fangatahan'ny tantsaha ny governemanta, dia nisy ny fanentanana hanome  hanome vary, izay nahatonga ireo olon-tsotra , vondron'olona ary fikambanana isan-karazany hanome fanampiana ireo tantsaha nanao fihetsiketsehana.
Mbola tsy nilaza na inona na inona momba ity raharaha ity ny filoham-pirenena hatramin'ny nisian'ny fanaparitahana tamin'ny voalohany avrily. Saingy nanambara ireo eo ambany fahefany fa hisy ny fandalinana tsy mitongilana amin'ny toe-draharaha. Nanontany ampahibemaso anefa izy ireo fandrao nisy tokoa ireo mpanetsiketsika avy amin'ny elatra havia nanamboatra  ny sain'ny tantsaha hanatevin-daharana ny fihetsiketsehana.
Na izany aza, mbola tsy voavaly ny fanontaniana  any an-tsain'ny maro: Mety ve ny mitifitra tantsaha noana mangataka sakafo fotsiny avy amin'ny governemanta?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/10/81240/